Indlela yokwenza iifayile ze-Instagram: isixhobo esisombulula yonke into kuwe | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Indlela yokwenza iifayile ze-Instagram
Encarni Arcoya | 13/09/2021 20:16 | Ukuhlaziywa ukuba 13/09/2021 20:19 | Ezahlukeneyo
Xa uvula i-Instagram kwaye ufuna ukufaka ifoto, uyazi ukuba iifilitha ezahlukileyo zibonakala zisebenza kwifoto kwaye iyenza ukuba ijongeke ngakumbi. Kodwa kwimeko yamabali, oko kukuthi, amabali e-Instagram, ezi zahluke ngokupheleleyo. Ukuba ujonge kancinci, uya kubona ukuba abanye babo banamagama abadali babo. Ngaba ufuna ukuba zingadalwa? Indlela yokwenza iifayile ze-Instagram? Kwaye ungayisebenzisa njani kwinethiwekhi yoluntu?
Ukuba ukuthanda kwakho sele kukuphosile, ukuba ufuna ukubonisa wonke umntu italente onayo yoyilo, kwaye kwangaxeshanye wonwabe ngokungafaniyo naphambi kokuba wenze isihluzo sokuqala esithandwa ngabantu abaninzi, ke siza kukunika izitshixo zokufezekisa yiyo.
1 Iifilitha ze-Instagram, uguquko olukhulu
2 Spark AR, isixhobo sokwenza iifilitha ze-Instagram
3 Izinto zokwazi ngaphambi kokwenza iifayile
4 Uyenza njani iifilitha ezisisiseko ze-Instagram
Iifilitha ze-Instagram, uguquko olukhulu
Xa i-Instagram yayiqala yayingenamabali, kwakungekho zixhobo zokucoca ulwelo kwaye yayiyinethiwekhi encinci. Ngoku iyaphikisana kwaye igqithile nge-Facebook enkulu. Kwaye nangona iyinkampani enye, "unyana omncinci" ugqithile kumdala. Baninzi abantu abakhetha i-Instagram endaweni ye-Facebook kwaye iyenzile yavela.
Kwaye, ekuqaleni, izihluzi zazinjalo. Kuphela liqonga elinokubandakanya amacebo okucoca ulwelo amatsha, enze kwaye asasaze ukusetyenziswa kwazo. Kude kube bahamba inyathelo elinye ngokuvulela abadali kunye nabaqulunqi ukuba benze into yabo kwaye babe neqonga apho lokwazisa ubugcisa babo.
Ukwenza oku, kufuneka isixhobo: Yathetha AR.
Ekuqaleni eli yayiliqonga lokwenyani elingathandabuzekiyo elivalelweyo, kwi-beta, kodwa kancinci kancinci yayifumana indawo yayo kwaye ivaliwe kwaye ibekelwe umda kwabambalwa, yashiywa ivulekile kuye nawuphina umntu ofuna ukuzama nokuyila iifilitha ze-Instagram.
Kodwa uzenza njani iifilitha ze-Instagram? Ewe, ngenxa yoku kuya kufuneka uyazi ukuba uyiphatha njani le nkqubo. Ukongeza, kuya kufuneka uneakhawunti ye-Instagram kunye ne-Facebook edityanisiweyo (nokuba kukwiphepha okanye iprofayile).
Spark AR, isixhobo sokwenza iifilitha ze-Instagram
I-Spark AR sisicelo osifunayo ukwenza iifayile ze-Instagram. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uyazi ukuba okwangoku kuphela ziikhompyuter. Ukuphuhliswa kwesicelo esiphathwayo kuyaqhubeka, kodwa akukabikho.
Ukukhuphela le nkqubo kufuneka yiya kwiphepha elisemthethweni le-Spark AR kwaye ukhuphele usetyenziso kwikhompyuter yakho. Ngokukhawuleza ukuba uyenze isebenze, iya kuqala inkqubo kwaye ewe, unokoyika ekuqaleni kuba awuqondi nantoni na, kodwa ungakhathazeki kuba iwebhusayithi yona inesifundo sokukunceda ufunde. Ngapha koko, nje ukuba ukhuphele usetyenziso, unokucofa indawo ethi "funda" eya kukunceda ukuba wenze "isihluzo" sokuqala ngenyathelo ngenyathelo (ukuze wazi ukuba mawenze ntoni).
Izinto zokwazi ngaphambi kokwenza iifayile
Ngaphambi kokuba uqale ukwenza amacebo okucoca ulwelo kunye nokucinga ukuba, ngenxa yoko, i-Instagram izakuthatha uyilo lwakho kwaye uzibeke eluntwini ukuze wonke umntu azisebenzise kwaye adume, kufuneka wazi amanqaku athile abalulekileyo:
Los Iifilitha zesiko ezenziweyo zininzi. Gcina ukhumbula ukuba yenzeka kwihlabathi liphela, kwaye ukuze uphumelele kuya kufuneka ubenakho ukunika into yoqobo. Kwakhona, icebo lokucoca ulwelo liya kubonakala kuphela kubantu abakulandelayo kwi-Instagram. Kuphela ukuba umntu ongakulandeliyo ubona kumabali okucoca ulwelo anokukuzama. Kodwa ngokomgaqo, ngubani oya kuba ngabaphulaphuli bakho iya kuba ngabo balandeli. Ngoku, ukuba babelana ngayo, kwaye emva koko babelana ngayo, emva koko unokufumana ithuba elingcono lokuba ibe sisihluzo esidlangalaleni.
Enye inqaku lokugcina engqondweni kukuba ungoyiki ukwenza izinto ezintsha. Kwiziko lewebhu leSpark AR linee-tutorials ezingama-44 zokufunda ukusebenzisa isicelo, ukwenza iifilitha (ukusuka kwezona zisisiseko ukuya kwezona zinzima). Kodwa ukusuka apho yingcinga yakho kunye nobuchule obuza kudlala. Kuya kufuneka ucinge ngento abantu abayithandayo, abanxiba ngayo, nabangayenzanga okwangoku.
Okokugqibela, izihluzo zesiko ziya kwenzeka kuphela Sebenzisa kuxhomekeke kwinkqubo yokusebenza kwefowuni, uguqulelo lwe-Instagram, inethiwekhi ... Sithetha ntoni ngale nto? Ewe, kuya kubakho ezinye ezifumanekayo kwii-mobiles ezimbalwa kunye nezinye zabanye.
Uyenza njani iifilitha ezisisiseko ze-Instagram
Okulandelayo siza kukushiya amanyathelo ekufuneka uwathathe ukwenza isihluzo sokuqala. Gcina ukhumbula ukuba into esiza kuyenza kukulandela isifundo, ngakumbi ukuze ufunde ukuba sisixhobo esisebenza njani. Kodwa eyona nto intle onokuyenza kukuzama, ukudlala, kunye nokuzilungiselela. Ayikho enye indlela yokufunda ukusebenzisa isixhobo ngaphandle kwendlela "yokulinga kunye nephutha". Oko kukuthi, zama ukufumana yonke into isicelo esingakwenzela yona.
Los amanyathelo okucoca kuqala (umzekelo, ekugqwethweni kobuso) zezi:
Khuphela inkqubo ye-Spark AR kwaye uyifake kwikhompyuter yakho. Unenguqulo yeWindows kunye neMac, kodwa hayi iLinux.
Nje ukuba ifakwe, iya kukucela ukuba ungene ngeakhawunti yakho ye-Facebook (i-imeyile kunye negama lokugqitha).
Sele ungaphakathi. Kwaye into yokuqala oza kuyibona siscreen apho ikunika imizekelo yeefilitha, nokuba uzilayishe okanye uzenze kwasekuqaleni (njengezifundo). Umhleli onawo uyafana nomnye wemifanekiso, ke ukuba uzisebenzisile, awuyi kuba nengxaki enkulu.
Ukwenza ukuphazamiseka kobuso, enye yezifundo ezizayo, kuya kufuneka ulandele isifundo esiphuma, kodwa ukukunika umbono, into ekufuneka uyenzile kukungenisa isiphumo sesicelo.
Xa sele ulapho, kuya kufuneka ucofe iFaceMesh_Distortion. Uya kufumana ipaneli apho unokumisela khona ubugqwetha (nangona ufuna njalo). Okona kumnandi kukwicandelo leDeformation, onokuthi uguqule iliso ngalinye, isilevu, umlomo, impumlo, njl. Njengoko umboniso ukukunika, awuyi kuba nangxaki.
Emva kokugqiba, kuya kufuneka ucofe kuphela, kwikholam yasekhohlo, utolo oluphezulu lokukunika ukhetho lokuthumela ngaphandle. Iya kuvula ikhusi ukuze utsho ukuba ufuna ukuyilinganisa kangakanani, umgangatho wayo, njl. Nje ukuba unayo, cofa u-Export kwakhona kule festile kwaye uyiqambe igama. Kwaye kunjalo!
Ngoku, zininzi iindlela onokukhetha kuzo, nokuba ngaba uthatha iinyani njengesiseko, okanye uzenze kwasekuqaleni. Kufuneka uziqhelanise kwaye ubone ukuba yintoni ephumayo. Ngaba ukhe wenza iifilitha ze-Instagram?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Indlela yokwenza iifayile ze-Instagram
Uyenza njani ilogo emva kweZiphumo